टेकु अस्पतालमा को’रोना परीक्षण गराउनेको भीड, सामाजिक दूरी त कुरामात्रै – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/टेकु अस्पतालमा को’रोना परीक्षण गराउनेको भीड, सामाजिक दूरी त कुरामात्रै
काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लक्षण नभएका व्यक्तिहरुको को’रोना परीक्षण गर्न नपर्ने बताउँदै आएको छ ।
असार ९ गतेको नियमित लाइभ अपडेटमार्फत मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यका आउनेहरुसँग कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नखोज्न घरभेटीहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
काठमाडौंका घर’भेटीहरुले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट मागेको गुनासो आएको भन्दै डा गौतमले उपत्यका भित्रिने बित्तिकै को’रोना परीक्षण गर्न नपर्ने बताएका थिए ।
उनले उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौं आउनेलाई को’रोना परीक्षणको दवाब नदिन पनि अपिल गरेका थिए । तर काठमाडौं बाहिरबाट आउनेहरुलाई १४ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्न डा. गौतमले सुझाएका थिए ।
सरकारले अहिले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको छ । सडकमा निजी तथा रिर्जभ गरिएका सवारी साधन चल्नथालेका छन् ।
काठमाडौंका पसल, होटल तथा व्यवसाय र कार्यालय पनि खुल्न थालेका छन् । काठमाडौंमा अहिले चहलपहल निकै बढेको छ । लकडाउन अघि र लकडाउनको समयमा बल्लतल्ल गाउँ पुगेकाहरु फेरी शहर फर्कन थालेका छन् ।
उप’त्यका बाहिरबाट अहिले काठमाडौं भित्रिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । बाहिरी जिल्लाबाट आउनेलाई काठमाडौंका घरभेटीहरुले को’रोना परीक्षण रिपोर्ट माग्न पनि छाडेका छैनन् । अहिले घरभेटीहरुले मात्र होइन लामो समय बिदामा बसेर काममा फर्किदा कतिपय कार्यलयहरुले समेत कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट माग्ने गरेका छन् । जसकाकारण शुक्रराज ट्रपिलक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा को’रोना परीक्षण गराउनेको भिड बढ्न थालेको छ ।
आइतबार पनि उपत्यका बाहिरबाट आएर को’रोना परीक्षण गराउनेको ठूलो लाइन शुक्रराज अस्पतालको गेट बाहिरसम्म थियो ।
अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप बास्तोलाका अनुसार लकडाउन खुकुलो भएसँगै कोरोना परीक्षण गर्न दैनिक ५ सयदेखि एक हजारसम्म मानिसहरु टेकु अस्पतालमा आउन थालेका छन् ।
‘अहिले हाम्रो अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गराउन आउनेको भीड छ । यी सबै काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरु हुन्,’ डा. बास्तोलाले खबरहबसँग भने, ‘बाहिर जिल्लाबाट आएकालाई घरभेटीले को’रोनाजाँच गराएर आउनु भनेर पठाएका हुन् । दैनिक ५ सयदेखि एक हजारसम्म मानिसहरु को’रोना परीक्षण गराउनु पर्‍यो भन्दै आउन थालेका छन् ।’
डा बास्तोलाकाअनुसार शुक्रराज अस्पतालमा आउने बिरामीलाई सामाजिक दुरी कायम गर्न २ मिटरको फरकमा गोलो घेरा बनाइएको छ । तर को’रोना परीक्षण गराउनेको चाप बढेपछि अस्पताल प्रशासनलाई सामाजिक दुरी कायम गराउन पनि मुस्किल परेको छ ।
‘हामीले गोलो घेरा बनाएर दूरी कायम गरी लाइन बस्ने व्यवस्थापन गर्न खोजेका थियौं,’ डा बास्तोलाले भने, ‘तर यति धेरै मान्छे आउँदा दूरी कायम गराउन सकिदो रहेनछ ।’
काठमाडौं उपत्यकाका वीर, त्रिवि शिक्षण र पाटन अस्पतालमा पनि को’रोना परीक्षण हुन्छ । यी अस्पतालमा बिदेश जानुपर्ने वा कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य चाहिनेलाई शुल्क तिरेर परीक्षणको व्यवस्था गराइएको छ । वीर, टिचिङ र पाटन अस्पतालमा परीक्षण गर्दा ५ हजार ५ सय शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले पनि उपत्यका भित्र आउने सर्वसाधारण शुक्रराज अस्पतालमै आउने गरेका छन् ।
‘काठमाडौंमा अन्य अस्पतालमा पनि को’रोना परीक्षण हुन्छ । तर सबैजना यही आएका छन्,’ डा बास्तोलाले भने, ‘दूरी कायम गरी व्यवस्थापन गर्ने हो भने आज त त्रिपुरेश्वरसम्म लाइन पुग्छ होला ।’
डा बास्तोलाका अनुसार अस्पतालमा को’रोना परीक्षण गर्न सबैको पीसीआर परीक्षण भने भएको छैन । अस्पतालले को’रोना संक्र’मित धेरै भेटिएका जिल्लाबाट आएका, को’रोनाको लक्षण देखिएका व्यक्तिको मात्र पीसीआर परीक्षण गर्ने गरेको छ ।
यस्तै लक्षण नदेखिएका व्यक्तिहरुलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न निर्देशन दिएर घर पठाउने गरेको डा बास्तोलाले बताए ।
‘आवश्यक परेका, रोगग्रस्त क्षेत्रबाट आएका, शंकास्पद लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुको मात्र पीसीआर परीक्षण गर्ने गरेका छौं,’ डा बास्तोलाले भने, ‘अन्य व्यक्तिहरु जो रोग नै नफैलिएको ठाउँबाट आएका छन्, कुनै लक्षण नै नभएका व्यक्तिहरुलाई ओपीडीको टिकटमा १४ दिनहोम क्वारेन्टाइन अनिवार्य भनेर एउटा डकुमेन्ट बनाएर पठाउने गरेका छौं ।’
डा बास्तोलाका अनुसार शुक्रराज अस्पतालमा हाल २९ जना को’रो’ना सं’क्रमितहरु आइ’सोलेसनमा उपचारत छन् ।
खुसीको खबर: अब खाना पकाउने ग्यास यति सस्तो मूल्यमा पाईने , अरु के-केमा पाइन्छ त छुट ?
दाङमा मानब कंकाल फेला, युवतीको फेक आइडीबाट अ’स्लिल पोस्ट गरेपछि हराएका पत्रकारको हुनसक्ने आ’शंका